चीन कुशल र स्वादिष्ट तामचीनी कच्चा फलाम डच ओवन निर्माण र कारखाना | सान्क्सिया
कुशल र स्वादिष्ट तामचीनी कास्ट फलाम डच ओभन
तौल:लगभग 6.3 किलो
रंग:गुलाबी, हरियो, सुन्तला, नीलो, बैजनी र अधिक, सबै तपाइँको आवश्यकता अनुसार
तामचीनी बर्तन सबैभन्दा व्यापक घर खाना पकाउने मा प्रयोग गरीन्छ, किनकि यो उत्कृष्ट गर्मी चालन र भण्डारण प्रभाव छ। खाना पकाउने धेरै छिटो छ, जो तपाइँको खाना पकाउने कौशल अधिकतम गर्न सक्नुहुन्छ।
Enameled कास्ट फलाम प्रेरण, बिजुली, ग्यास र सिरेमिक स्टोभ सहित लगभग सबै खाना पकाउने सतहहरु मा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो पनी ओवन मा प्रयोग गर्न सकिन्छ, 500 डिग्री सम्म!
Enameled कास्ट फलाम एक चमकदार, nonstick सतह हलचल- frying, sauteing, braising, stewing, बेकिंग र अधिक को लागी एकदम सही छ! कम गर्मी सेटि Using को उपयोग खाना चिपकाउन बाट रोक्छ। धातु बर्तन चीनी मिट्टी के बरतन फिनिश खरोंच गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले काठ, सिलिकॉन वा नायलॉन बर्तन प्रयोग गर्नुहोस्।
एक चिकनी पोर्सिलेन शीशा, ठोस कच्चा फलाम संग जोडिएको, सुन्दर enameled cookware बनाउँछ! यो कच्चा फलाम को सबै लाभहरु मा परिणाम, बेहतर गर्मी प्रतिधारण र गर्मी वितरण जस्तै, downsides बिना। Enameled कास्ट फलाम मसाला को आवश्यकता छैन, र यो अम्लीय र क्षारीय खाद्य पदार्थ प्रतिरोधी छ। उज्यालो बाहिरी रंग र एक कालो भित्री तपाइँको भान्छा को लागी हंसमुख रंग जोड्नुहोस्!
ergonomic ह्यान्डल यो सजीलो सार्न वा तपाइँको प्यान उठाउन बनाउँछ। सधैं ओवन mitts वा बर्तन धारकहरु जब प्यान ह्यान्डलिंग को उपयोग गर्नुहोस्; खाना पकाउने र खाना पकाउने साथै पकाउने, पकाउने, उमाल्ने र स्टू बनाउन को लागी ढक्कन को उपयोग गर्नुहोस्! यो गहिराई सामान्य उथली casserole भन्दा गहिरो छ।
Enameled कास्ट फलाम dishwasher सुरक्षित छ, तर हामी हात धुने को लागी चमकदार फिनिश कायम राख्न को लागी सिफारिश गर्दछौं। तातो पानी र हल्का डिटर्जेंट संग हात धुनुहोस्।
उत्पादन को रंग छनौट वा अनुकूलित गर्न को लागी तपाइँ मा निर्भर छ। उत्पादन को गुणवत्ता सख्ती Sanxia द्वारा निरीक्षण गरिनेछ। कान, भित्ता र बर्तन को रंग सबै पक्ष मा कुनै दोष छैन सुनिश्चित गर्नेछ। विवरणहरु आश्वस्त छन्। अवश्य पनि, उपस्थिति निरीक्षण को अतिरिक्त, उत्पादन को पेशेवर निरीक्षण पनि सख्ती संग लागू गरिनेछ। उत्पादन को गुणवत्ता पनि हाम्रो सबैभन्दा चासोको विषय हो।
अघिल्लो: तामचीनी बर्तन सूप बर्तन घर 24cm गैर छडी तामचीनी कास्ट फलाम भाँडा stewing बर्तन
अर्को: उच्च गुणस्तर तामचीनी गैर छडी कास्ट फलाम फ्राइ pan प्यान स्टेक बर्तन
ncoated कास्ट आयरन Skillet, xtreme फलाम Skillet, कास्ट आयरन Skillets नाम, कास्ट आयरन स्किलेट, नाम Skillet, tainless कास्ट आयरन Skillet,